Izibonelelo zePterostilbene Powder njengeNootropics kunye neziXhobo zokuLwa nokuGuga i-Shangke Chemical
Izibonelelo zePterostilbene Powder njengeeNootropics kunye nezinto zokuNceda abantu abadala
1. Yintoni iPterostilbene?
I-Pterostilbene yichemicals ebaluleke ngokwemvelo eveliswe ngexesha lobomi bezityalo ezithile njengendlela yokulwa usulelo. Le khompawundi iyafana nenye ikhompiyutha eyaziwa ngokuba yi-resveratrol kwaye ifumaneka ngokulula kwifomu yokuncedisa. Izongezo zePterostilbene zifumaneka kakhulu. Oku kuthetha ukuba zinokungena emzimbeni ngokulula nangokukhawuleza kwaye azonakaliswanga kwinkqubo yokugaya. I-Pterostilbene powder nayo isebenza ngokufanelekileyo, kodwa ubomi bayo bufutshane kakhulu kuba bungaphantsi kwemizuzu eyi-100.
Imithombo yokutya yePterostilbene
Pterostilbene Imithombo yokutya ibandakanya iiblueeberries, ii-almonds, i-cranberry, ii-mulberry, ii-peanthi, ii-wayini ebomvu, iidiliya ezibomvu, amagqabi omdiliya, amagqabi omthi wase-India, i-Red sandalwood, kunye necocoa. I-Blueberries, nangona kunjalo, ingowona mthombo wokutya uphezulu wePterostilbene, kodwa inani leeblueberries zisezincinci ngokuthelekiswa nezongezelelo zePterostilbene. Umxholo wePterostilbene blueberries kukholelwa ukuba umalunga nama-99 ukuya kwangama-52 ee-nanograms, kuyo yonke iigram zeeblueberries.
2.Indlela yokusebenza ye-Pterostilbene
Indlela yokusebenza ye-Pterostilbene yahlukile kule ye-resveratrol. I-potterilbene yeyona ndawo inamandla kakhulu. Izibonelelo ezahlukeneyo ze-Pterostilbene powder zihambelana nendlela eyahlukileyo yokwenza. Isenzo se-pharmacological ye-trans-pterostilbene ibandakanya i-antineoplastic, antioxidant, kunye ne-anti-immune.
I-Pterostilbene ibonisa imisebenzi esebenzayo ye-antifungal enezihlandlo ezilikhulu enamandla kune-resveratrol. I-Pterostilbene i-compost ikwabonisa iziphumo zokungasebenzi kakuhle. Ukukhuselwa kwezityalo kwi-pathogens ezahlukeneyo kubonakala kuyindlela ebaluleke kakhulu ye-stilbenes, kubandakanya ne-Pterostilbene, kwaye le misebenzi yandisa kwizilwanyana nakubantu.
I-Pterostilbene ikwabonisa iziphumo ze-anticancer ngeendlela ezininzi zeemolekyuli. Uphando lubonisa ukuba iintshukumo zePterostilbene zibandakanya iintlobo ze-tumor suppressor genes, ukuguqulwa kwendlela yokuhambisa umqondiso, i-oncogene, iintlobo zesahluko seseli, kunye neeseli zemijikelezo yomjikelo weseli.
Iipropathi ze-antioxidative zePterostilbene zahluke kakhulu kuleyo yeververatrol. Kwi-resveratrol, amaqela amathathu e-hydroxyl enza ukuba i-ROS ingasebenzi (iintlobo ezisebenzayo zeoksijini) kwii-lymphoblasts ezizodwa kunye negazi lipheleleyo ngelixa iPterostilbene, eneqela eli-1 le-hydroxyl kunye namaqela ama-2 e-methoxy anciphisa i-ROS yangaphandle. Ukuqhelaniswa kwepropathi ye-antioxidation kwenza ukuba ukusetyenziswa kwePterostilbene powder kujolise kwi-extracellular reactive iintlobo zeoksijini, ezibangela ukonakala kwezicubu ngexesha lokuvuvukala okungapheliyo.
Apha ngezantsi kukho iindlela zeepterostilbene zesenzo ezixoxwe kwiinkcukacha;
Indlela yokusebenza yePterostilbene; Ukusebenza kweSirtuin
I-Pterostilbene ivuselela umendo otyikityayo weSIRT1 kwiiseli ezibonelela ngokhuseleko kumonakalo weselula, ngokwenza njalo uyisebenzise. Le ndlela iphakamisa i-p53 expression. I-P53 yiprotein ekhusela iDNA kumonakalo kwaye ikhusela iiseli ekuguqukeni komzimba ezinokubangela umhlaza.
I-SIRT1 inokukuthintela kumonakalo kunye nokuwohloka kweeseli, eziqhubeka njengoko ukhula.
Iziphumo zokuchasana nokuvuvukala
Izifundo ezininzi zibonise ukuba i-pterostilbene chemicals inflexander ephantsi ilawulwa yi-TNF-alpha (tumor necrosis factor-alpha). Uxinzelelo lwe-Oxidative luzisa ukuvuvukala; I-Pterostilbene i-blockle interleukin-1b kunye ne-TNF-alpha ngokunciphisa iintlobo zeoksijini ezisebenzayo.
Le khompawundi ikwakhusela ngokuchasene noxinzelelo ngaphakathi koomatshini beeselfowuni abaziwa ngokuba yi-ER (endoplasmic reticulum). Kuphando, xa i-lining yeeseli zemithambo yegazi ivezwe kwi-Pterostilbene powder, ii-lining zazo aziphendulanga kwimiqondiso yokuvuvukala, kwaye azizange zibonakale ngathi ziphazamisekile.
Indlela yokusebenza yePterostilbene; Iziphumo ezinxamnye nomhlaza
Ngokumangalisayo, ngaphandle kokunciphisa uxinzelelo lwe-ER (endoplasmic reticulum) kwi-lining yemithambo yegazi, iPterostilbene yandisa uxinzelelo kwi-endoplasmic reticulum yeeseli zomhlaza womqala. Ke, ngenxa yoko, yonakalisa iiseli ezinomhlaza kwaye ikhusela kuxinzelelo lwe-oxidative kwiiseli ezisempilweni.
Kwiiseli zomgogodla okanye ubuchopho (i-glioma) iiseli zomhlaza, i-Pterostilbene esezantsi i-Bcl-2 kwaye iphakamisa iBax; Olu tshintsho lwenza ukuba “ukuzibulala” kubambe iiseli ezibangela ukuba umhlana okanye iiseli zengqondo zife.
Iiseli zomhlaza zisebenzisa indlela yomgama eyaziwa ngokuba yi-Notch-1, ukuzikhusela kwisenzo samayeza e-chemotherapy, kubandakanya i-oxaliplatin kunye ne-fluorouracil. Iibhloko zePterostilbene i-Notch-1 zibonisa ukuba amathumba abuthathaka kakhulu kunyango ngokusebenzisa ichemotherapy.
I-Pterostilbene isezantsi ukuveliswa komxube wemiphunga okhuthaza imiphunga, kubandakanya i-MUC1, b-catenin, Sox2, NF-κB, kunye ne-CD133. Ezi ziphumo zidibeneyo zinciphisa ukuvuvukala kwaye zenze ukuba kungabi lula ukukhula kweeseli zomhlaza.
I-Pterostilbene iyakwazi ukujolisa kwingingqi ye-hippocampus ngokukhethekileyo kwingqondo. Apha, yandisa i-CREB (iprotheni yokuphendula ye-cAMP-protein), i-BDNF (i-neurotrophic factor), kunye ne-MAPK (i-mitogen-activated protein kinases),
Ezi proteni zintathu zinceda ii-neurons ukuphindaphindeka, ukukhula, kunye nokuphendula ngokufanelekileyo kwiindawo ezijikeleze zona. Ii-antidepressant ze-SNRI nazo zijolise kwezi ndlela.
I-Pterostilbene ikwandisa iprotein eyaziwa ngokuba yi-Nrf2 kwi-hippocampus, ethi yona ikhuthaze ukubonakaliswa kweeproteni ze-antioxidant.
I-Pterostilbene ithintela umzimba ngokuchasene nesifo se-Alzheimer ngokunika ukhuselo kwingqondo ngokuchasene ne-beta-amyloid (Aβ). Ikwenza oku ngokubandakanya i-Akt kunye ne-PI3K, iiproteni ezimbini ezixhasa ukukhula kwe-neuron, imemori kunye nokufunda.
3. Izibonelelo zePterostilbene powder
Kuxutyushwa ngezantsi kwezi zintathu zibaluleke kakhulu i-pterostilbene powder izibonelelo;
i. Pterostilbene njenge nootropics
Njengoko sisaluphala, iipateni ezintsha zeengcinga ziya kuba nzima kakhulu ukwakha, kunye neenkumbulo ziya kusiba nzima ukufikelela kuzo. Ukungakwazi ukwenza imisebenzi yesiqhelo yokuqonda kunciphisa nako. Izinto zokuthambisa zePterostilbene zinokukunceda ekudalweni kwendawo evuselelwayo ye-neural nangaliphi na iminyaka.
I-Pterostilbene yi-nootropic enamandla, encedisa ukuphumla kwengqondo kunye nophuhliso lwengqondo. Iphinda ithathwe rhoqo ngexesha langaphambi kokusebenza ngenxa yesakhono sayo sokunceda kwi-vasodilation yemithambo yegazi. Ke, ke, ibonelela ngeziphumo ezifanayo nezo zezinye izithako ze-nitric oxide boosting.
Izibonelelo ze-Pterostilbene nootropic kukholelwa ukuba zibangelwa sisakhono sayo sokunyusa amanqanaba e-dopamine. Kwiintonga, i-Pterostilbene yanciphisa uxinzelelo kunye nokuphucula imo. Kuphando olubandakanya iintonga ezindala, izongezelelo ze-pterostilbene zaphakamisa amanqanaba e-dopamine kunye nokuqonda okuphuculweyo. Kwakhona, xa i-Pterostilbene yenziwa yafumaneka kwii-rys 'ubuchopho hippocampus, inkumbulo yabo yokusebenza yandiswa.
Kwesinye isifundo esabandakanya iigundane, iPterostilbene ikwaphucule ukukhula kweeseli ezintsha kwihippocampus. Kwakhona iiseli ze-stem ezikhutshwe kubuchwephetsha beempuku ezisencinci zikhula ngokukhawuleza xa ziveliswa yiPterostilbene.
Ngokwezifundo zeseli, i-pterostilbene powder iibhloko i-MAO-B (i-monoamine oxidase B) kunye nokunyusa i-dopamine ekhoyo kwiingqondo zethu. Eli nyathelo lifana namachiza anyanga isifo sikaParkinson, anjenge-rasagiline, safinamide, kunye ne-selegiline. Kuphando, iPterostilbene ikhusela ii-neurons kumonakalo onxulunyaniswa nesifo sika-AD (isifo se-Alzheimer's).
Amandla okubamba uxinzelelo lwe-Pterostilbene ikwakholelwa ekubeni sisiphumo sokwazi kwayo ukuvimba i-monoamine oxidase B. Kwisifundo esithile, uPterostilbene wabonisa umsebenzi wexhala kwimithamo emibini kunye ne-mg / kg enye. Lo msebenzi wokuxhalabisa wekhompawundi wawunofana nqwa ne-diazepam ngexesha elinye kunye ezimbini mg / kg kwi-EPM.
ii. I-Pterostilbene kunye ukutyeba
Uphononongo olwenziwe uphando malunga nobuchule bePterostilbene ukulawula ukukhuluphala kwabonisa ukuba kukho unxibelelwano olukhulu phakathi kokuxhaswa kwepterostilbene kunye nolawulo lwesisindo. Izazinzulu zikholelwa ukuba i-Pterostilbene powder inamandla okuchaphazela amanqanaba emilinganiselo yamafutha ngenxa yesakhono saso sokunciphisa i-lipogenesis. I-Lipogeneis yinkqubo yokudala iiseli ezinamafutha amaninzi. I-Pterostilbene nayo ukunyusa ukutsha kwamafutha okanye i-oxidation enamafutha kwisibindi.
Kuphando olubandakanya abantu abakwiminyaka ephakathi abane-cholesterol ephezulu, iqela labathathi-nxaxheba abangazithathiyo iziyobisi ze-cholesterol baphulukene nobunzima ngelixa bethatha ii-pterostilbene supplements. Ezi ziphumo zamangalisa njengabaphandi kuba olu phando lwalungenanjongo yokulinganisa isongezelelo se-pterostilbene njengesixhobo sokulahleka kwesisindo.
Izifundo zezilwanyana kunye neeseli zikwabonisa ukuba ipterostilbene eyongezelelekileyo inokunceda ukuphucula imvakalelo ye-insulin. Yintoni eyenziwa nguPterostilbene kukuba ivimba inkqubo yokuguqula iswekile ibe ngamafutha. Ikwathintela iiseli ezinamafutha ekukhuleni nasekuphindaphindeni.
I-Pterostilbene ikwatshintsha ukwakheka kwe-gut flora emathunjini kwaye incedise ukugaya ukutya.
Iimpuku ezazidliwe ngePterostilbene zazinokugcwala okunesisu kunye nokunyusa okukhulu kweAkermansia muciniphila. A. muciniphila luhlobo lweentsholongwane olubonakala luthintela ukuvuvukala kwinqanaba eliphantsi, ukutyeba kakhulu, kunye neswekile. Le bacterium ibe yinto egxile kakhulu kuphando olungephi mva nje.
iii. I-Pterostilbene inyusa ixesha elide
Izibonelelo zokukhusela ukwaluphala kwe-Pterostilbene ziqhagamshelwe kumchiza osebenzayo obizwa ngokuba yiTrans-pterostilbene. Le khemikhali ibonakalisiwe ukuba inciphisa ukuvuvukala, ukwehla kwengqondo kwakhona, kunye nokuzinzisa iswekile yegazi. Kwi-vivo nakwizifundo ze-vitro ezixhasa uthintelo lwePterostilbene kunye nonyango. Le khemikhali ikwasebenza njenge-m caletic yokuthintela i-caloric, ekhuthaza umzimba ukuba ukhuphe i-biochemicals, kubandakanya i-adiponectin ecothisa inkqubo yokwaluphala ngelixa ikhuthaza ukuphiliswa.
Esi songezelelo sokuchasana nokwaluphala siyaziwa ngokukhuselekileyo kwizifo ezinxulumene nobudala, ngaloo ndlela sandisa ubomi. Kwiintonga, iidosi ezisezantsi zezi mpawu zincitshisiweyo zempawu ezinxulumene nokwaluphala. Uphononongo licebise ukuba ukutya imithombo emininzi yokutya ye-pterostilbene enje ngeeblueberries kunokucothisa imiceli mngeni yezempilo enxulumene nokuguga, kubandakanya isifo sengqondo esixhalabisayo kunye nomhlaza.
4. I-Pterostilbene kunye ne-resveratrol
Akukho mathandabuzo ukuba iPterostilbene kunye ne-resveratrol zinxulumene kakhulu. I-Resveratrol yaziwa ngokubanzi njengekhemikhali ye-biyoactive kwi wayini ebomvu kunye neediliya.
Izibonelelo zezempilo ze-resveratrol ziyafana nezo ze-Pterostilbene kwaye zibandakanya ukhuseleko ngokuchasene ne-Alzheimer's, iziphumo ze-anticancer, ukuqiniswa kwamandla okunyusa, iimpembelelo ezichasene nokuvuvukala, amandla anokubakho kwisifo seswekile, kunye nezibonelelo zeentliziyo.
I-Pterostilbene inene ngekhemikhali efanayo ne-resveratrol, kodwa uphando sele luxele ukuba iPterostilbene inokuba namandla ngakumbi kune-resveratrol kulawulo lweemeko ezithile zempilo. I-Pterostilbene ibonakalise amandla amaninzi okuphucula ukusebenza kwengqondo, impilo kunye nemithambo yeglucose.
Ubomi bePterostilbene mfutshane bufutshane kunesiqingatha sobomi be-resveratrol. I-Pterostilbene eneneni izihlandlo ezine ukukhawuleza ukufunxeka kwinkqubo yokugaya emzimbeni kunokuba ibuyele kwiirveratrol. Ngokwethiyori, oku kunokwenza iPterostilbene isebenze ngakumbi amaxesha amaninzi kune-resveratrol. Nangona kunjalo, kufuneka kwenziwe izifundo ezingaphezulu ukuqinisekisa oku.
I-Pterostilbene kunye ne-resveratrol nazo ngamanye amaxesha zidityaniswa ukubonelela ngokudibanisa ngendlela yecephule. Umdibaniso ohlanganisiweyo ukholelwa ekubeni unamandla ngakumbi njengoko uhlanganisa izibonelelo zezihlanganisi zimbini.
5. Isongezelelo sePterostilbene
Akukho mathandabuzo ukuba ukuze uzuze izibonelelo ezinqwenelekayo zePterostilbene, kuyacetyiswa ukuba uyithathe njengesongezelelo somgubo. Izongezelelo zePterostilbene zithengisiwe kwiivenkile zokutya zendalo ezininzi kunye nakwiivenkile ezikwi-intanethi ezikhethekileyo kwizongezelelo zokutya. Unokufumana kwakhona abavelisi be-pterostilbene kwi-intanethi.
IPterostilbene isongezelelo ifumaneka ikakhulu kwifom yeepilisi, ngeendlela ezahlukeneyo zedosi. Kuya kufuneka ukuba uyifunde ngocoselelo ilebheli okanye ilebhile kwaye uqaphele ubungakanani bePterostilbene kwisingxobo ngasinye ngaphambi kokuyithenga. Oku kubalulekile kuba iidosi ezahlukeneyo zinokubonisa iziphumo ezahlukeneyo.
Kwakhona, ezinye iithayile zongezelelo zepterostilbene zinokuba ngaphezulu kunoko kuphando olwenziwe ebantwini. Elona dosi luqhelekileyo lufumaneka phakathi kwe-50 mg ukuya kwi-1,000 XNUMX mg kwi-capsule nganye.
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, izongezelelo zokudibanisa ziyafumaneka, kunye nokudityaniswa okuthandwa kakhulu ngokuba yiPterostilbene kunye ne-resveratrol. I-Pterostilbene idityaniswa kunye ne-curcumin, iti eluhlaza, i-astragalus, kunye nezinye izinto zendalo.
Ungafumana kwakhona iicarma ezivaliweyo elangeni eziqukethe iPterostilbene nangona oku kunqabile. Inani lePterostilbene elifunekayo ukukhusela ngokukuko kumhlaza wolusu alifundiswanga, kodwa linokunika ukhuseleko olongezelelweyo.
6. Ungalufumana phi owona mgangatho uphezulu wePeterostilbene powder?
Ukuba ukhangela ipterostilbene powder ekumgangatho ophezulu uyithengiswa, ke wena ukwindawo elungileyo. Singengomnye wabenzi bokuthandwa, ukwazi, kunye namava e-pterostilbene e-China. Sinikezela ngemveliso ecocekileyo kunye nephakwe ngokufanelekileyo ehlala ihlolwa lilabhoratri yodidi lwesithathu lwehlabathi ukuqinisekisa ukucoceka kunye nokhuseleko. Sisoloko sihambisa iiodolo phaya e-US, eYurophu, e-Asiya, nakwamanye amazwe ehlabathi. Ke ukuba ufuna ukuthenga i-pterostilbene powder ekumgangatho ophezulu kakhulu, sinxibelelane ngoku.
URimando AM, Kalt W, Magee JB, Dewey J, Ballington JR (2004). "I-Resveratrol, i-pterostilbene, kunye ne-piceatannol kwi-vaccinium berries". J Agric Ukutya kwiChemicals 52 (15): 4713-9.
I-Kapetanovic IM, Muzzio M., Huang Z., Thompson TN, McCormick DL Pharmacokinetics, bioavailability yomlomo, kunye neprofayili ye-metabolic ye-resveratrol kunye ne-dimethylether analog yakhe, i-pterostilbene, kumagundane. Chemother. IPilisi. Ngo-2011; 68: 593-601.
Ukukhuseleka kokutshintshwa kwezinto zokugcina as isiseratrol njengokutya okutsha okuhambelana noMmiselo (EC) Hayi 258/97 ″. Ijenali ye-EFSA. Igunya loKhuseleko loKutya lwaseYurophu, iPhaneli ye-EFSA kwiiMveliso zeDietetic, iSondlo kunye neeAlleries. 14 (1): 4368
Becker L, Carré V, Poutaraud A, Merdinoglu D, Chaimbault P (2014). "Imifanekiso ye-MALDI yobuninzi bemifanekiso ebonakalayo yendawo efanayo ye-resveratrol, pterostilbene kunye ne vinigains kumagqabi ediliya". Iimolekyuli. Ngo-2013 (7): 10587-600.
2.Pterostilbene indlela yokusebenza
Izibonelelo ze-3.Pterostilbene powder
4.Pterostilbene kunye nereveratrol
6.Uyifumana phi eyona mgangatho uphezulu kaPeterostilbene powder?